Hei, Siri kubva kuIOS 10 inongoshanda pane imwechete kifaa | IPhone nhau
Handizive kana zvakamboitika kwauri (ndinofungidzira kuti zvine): urik kuchaja iyo iPad padhuze newe, iwe unotora iyo iPhone 6s, unoti Hei siri, iwe unoita mubvunzo uye iyo iPhone neIdad inokupindura panguva imwe chete. Kekutanga nguva inogona kuseka, asi zvirokwazvo haina kunyanya kana iwe uine zvishandiso zviviri zvine processor yeM9: pese nguva Siri painodanwa nezwi, ese madhizaini anopindura.
Zvinotaridza kuti ichi chinhu chakamboitikawo kune mumwe munhu kubva kuApple pane imwe nguva uye mhinduro ichauya kubva paruoko rweanotevera apple inoshanda system. Kubva iOS 10, system ichashanda zvakasiyana: paunoti "Hei Siri," mese muchatanga kuteerera, asi mumwe chete ndiye achapindura. Kana zvikaenda kudaro, chishandiso chiri kuzopindura chinotumira odha kune mamwe ese majaira kuti adzokere kunorara.
iOS 10 ichagadzirisa "Hei Siri" zvine hungwaru
Panguva ino, kusimudzira uku kunongoshanda nemidziyo yeIOS. Kunyangwe kana yaiswa WatchOS 3.0, iyo Apple Watch ichaenderera ichipindura kumurairo, asi hapana chinoita kuti tifunge kuti havazobatanidze ichi chitsva mune ramangwana betas. Isu tinorangarira kuti zvese zviri zviviri iOS 10.0 uye watchOS 3.0 izvozvi zviri mubeta yekutanga kune vanogadzira, shanduro dzakatangwa munaJune 13. Kana tikatarisa kuti Apple inowanzoburitsa beta nyowani vhiki mbiri dzese, zvinoshamisa kuti havasati vaburitsa beta yechipiri yavo ese masisitimu anoshanda.
Kunge iOS 9, iOS 10 isisitimu inoshanda inosanganisira inonakidza nhau, senge Siri inoenderana neyechitatu-bato kunyorera (Uye izwi nyowani!), Asi zvakare inosanganisira mashoma mashoma ezve diki diki izvo zvinowedzera mushandisi ruzivo. Kuyeuka kwatakamira kana Hei, Siri akangwara mienzaniso miviri yeiyi. Kuuya kwake kwepamutemo kwakarongerwa Nyamavhuvhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Izvi zvakanaka: Hei, Siri kubva kuIOS 10 inongoshanda pane imwechete kifaa panguva
Facebook inobvisa iyo Pepa app kubva kuApp Store